I-Hideaway Litchfield (Cabin One)
Rakula, Northern Territory, i-Australia
Igumbi e-i-lodge ibungazwe ngu-Hideaway
Gxila ebuhleni obumangelengele behlathi lethu laseNyakatho, kusukela ekunethezekeni nasekunethezekeni kwendlu yethu yangasese esezingeni eliphansi. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukuphumula ngokuthula nokuthula, uxhumane nemvelo, noma umane unethezeke futhi ujabulele amavayibhu esimanje, ayingqayizivele okuphila kweziqukathi zemikhumbi - le ndawo iyinto oyenzayo!​ Iphinde yenza indawo ekahle yokuza ekhaya ngemva kokuhlola Izimpophoma nezindawo ezikhangayo zaseLitchfield. Le khabhinethi izibekele yona yodwa, inohambo olufushane oluya e-Cabin 2 kanye nokuhlala kwabanikazi.
Ikhabethe lokuqala linesitsha esiguquliwe esingamamitha angama-40 sibe yindawo yokuhlala esezingeni eliphansi. Ihlanganisa indawo yokuphumula nekhishi elihlome ngokuphelele, ikamelo lokulala elinamafasitela aphansi kuya ophahleni, i-ensuite evulekile ebanzi enamathiselwe, kanye nompheme ovulekile ohlanganisa amagumbi womabili ukuze uthole isidlo sakho sakusihlwa sokuphumula ne-barbque.
Sikunikeza ubhekeni namaqanda kanye nokudla okumbalwa efrijini lakho ukuze sikwamukele e-Hideaway. Amakhabhinethi ethu anikwa amandla elanga emini kanye nejeneretha (ethule) ebusuku.
Womabili amagumbi ekhabetheni lakho angaba nesiphephetha-moya. Indawo enhle esakhiweni sethu esivame ukungabekezeleleki, ngaphandle uma sihlala kwelinye lamachibi ethu aseduze kakhulu noma ngaphansi kwempophoma yebo!
Izingane zamukelekile! Singenza isikhala phansi, sinikeze omatilasi, okombhede kanye nombhede.
Izingane ezineminyaka engu-5 nangaphezulu zizoba ngu-$10 ngobusuku obubodwa. Uzodinga ukusithumelela umlayezo nge-Airbnb ukuze uthole umtitilizo okhethekile.
Singakwazi ukuhlalisa umuntu omdala wesithathu ngo-$20 ngobusuku obubodwa. Uzodinga futhi ukusithumelela umlayezo nge-Airbnb ukuze uthole umtitilizo okhethekile. Uma kukhona abantu abadala ababili abengeziwe uzodinga ukucabangela ukuba namakhebhini ama-2.
Gxila ebuhleni obumangelengele behlathi lethu laseNyakatho, kusukela ekunethezekeni nasekunethezekeni kwendlu yethu yangasese esezingeni eliphansi. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukuphumula ngokuthula nokuthula, uxhumane nemvelo, noma umane unethezeke futhi ujabulele amavayibhu esimanje, ayingqayizivele okuphila kweziqukathi zemikhumbi - le ndawo iyinto oyenzayo!​ Iphinde yenza indawo ekahle yokuza ekhaya ngemva kok…
4.99 (izibuyekezo ezingu-105)
Sitholakala ku-7km nje ukusuka e-Wangi Falls, enye yezimpophoma ezinkulu neziyingqophamlando e-Litchfield. Isikhathi esiningi sonyaka kuvulelwe ukubhukuda. Kukhona amathilomu amabili kanye nomsebenzisi wokuvakasha wendiza enophephela emhlane ebangeni elifanayo. Kukhona ezinye izimbobo zamanzi ezimbalwa eziseduze.
Sihlala esizeni, cishe imizuzu emi-3 ukusuka emakhabetheni. Umnyango wethu uvuliwe, uma unemibuzo mayelana nendawo yakho yokuhlala noma indawo yangakini.
UHideaway Ungumbungazi ovelele